दक्षिण एशियामा कसरी आर्थिक रुपमा सबैलाई उछिन्दैछ बंगलादेशले? यस्तो छ आर्थिक विकासको कथा
प्रकाशित मिति: Oct 3, 2019 9:06 PM | १६ असोज २०७६
त्यसैगरी बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर नै करिब ८ प्रतिशत छ। छिमेकी भारतकै अर्थतन्त्रको वृद्धिदर भने खस्केर ५ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ। उता अर्को दक्षिण एशियाली राष्ट्र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पनि ५–६ प्रतिशतको बीचमा छ।
यसैगरी विदेशी ऋणको सवालमा बंगलादेशमा प्रति व्यक्ति ४३४ अमेरिकी डलर छ भने पाकिस्तानमा प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण ९७४ अमेरिकी डलर छ। यिनै कारणले अहिले बंगलादेशलाई दक्षिण एशियाली नयाँ बाघको उपमा दिन थालिएदै छ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार बंगलादेशका १२० भन्दा धेरै कम्पनीहरुले विश्वभरिका ३५ देशमा एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरिरहेका छन्।
बंगलादेशी कम्पनीहरुको यो सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात सन् २०२१ सम्ममा १ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर ५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीना वाजेदले सन् २००९ मा डिजिटल बंगलादेश कार्यक्रम शुरु गरेकी थिइन्। जसअन्तर्गत सरकारी सेवाहरुलाई डिजिटलाइज्ड मात्र गरिएन, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार समेत गरियो।
दक्षिण एशियामा कसरी आर्थिक रुपमा सबैलाई उछिन्दैछ बंगलादेशले? यस्तो छ आर्थिक विकासको कथा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।